Dzidzo Archives | Utah Pride Center
musha » dzidzo
Directory Category: dzidzo
Koreji Nhungamiro yeLGBTQ Vadzidzi
Kuwana chikoro chaicho kwakakosha kune wese anotarisira mudzidzi, asi avo vanoziva sevabonde, ngochani, bisexual, transgender, kubvunza, kana queer (LGBTQ) vanosangana nemamwe matambudziko pavanosarudza koreji. Pamusoro pezvipingamupinyi zvinotarisana nevadzidzi vese, sekutsvaga akasiyana majors uye kuwana rubatsiro rwemari, vadzidzi vari LGBTQ vanobatsirwa nekuwana chikoro chiri kubvuma kuzivikanwa kwavo uye kutsigira kwavo kwakasarudzika zvido.
Kutsvaga LGBTQ kudzidza izvo zvinoita kuti koreji ive nemari yakawanda inogoneka? Kune akati wandei emabhasikoro akagadzirirwa vadzidzi veLBBTQ, saka takaunganidza dzimwe sarudzo huru dzekuteedzera.
Disiki (yakatumirwa pane saiti): Kambani yedu inogamuchira muripo kubva kune vamwe vedu vanoonekwa pawebhusaiti yedu. Heano maitiro atinoita mari. Yedu kutsvagurudza, nhau, ratings, uye kuongororwa kunoongororwa uchishandisa yakasimba yekunyora kutendeseka. Vedu vekunyora vashandi havagashiri nhungamiro kubva kune vanoshambadzira pawebhusaiti yedu.
Chinyorwa cherubatsiro uye Rutsigiro zviwanikwa zveLGBTQ Vadzidzi
Wese munhu anogona kuve nyajambwa wekushungurudzwa kana kudheererwa, kunyangwe kana vasiri vemuzvikwata zvakashurwa zvisina tsarukano nenzanga. Nekudaro, kana tichitaura nezvebonde uye nevamwe vashoma, mamiriro acho anova akakomba.
Koreji inzvimbo yakaoma kune wese mudzidzi. Sekureva kweNational Survey yeLGBTQ Vechidiki Njere Hutano yakaitiswa mu2019, 71% yevechidiki veLBBTQ vakashumwa kusarurwa kuzivikanwa kwavo pabonde uye maitiro. Nepo 87% yavo yakati zvaive zvakakosha kwavari kuti vawane yakachengeteka nzvimbo uye sangano rinotsigira vechidiki veGBBTQ. Nechemufaro, zviwanikwa zvevadzidzi veLBBTQ zviripo uye vadzidzi vane mukana wekunamatira kwavari. Zvakare, kune mawebhusaiti uye zvirongwa zvinogona kubatsira vadzidzisi uye vabereki kubata LGBTQ vadzidzi nenzira yekutsigira. Ngatikurukurei nezvavo!
Batanidza kune webhusaiti